Iju Mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu mmiri ozuzo kacha emebi bụ idei mmiri, ebe ọ bụ na ha na-ewepụ ihe niile dị n'okporo ụzọ ha. Osisi, ulo, uzo na ogologo wdg. N'ihi nke a, ihe okike a bụ otu ihe kachasị atụ ụjọ n'obodo, ebe mmiri ọ na-esi n'ike gafere.
N'ime oghere a, ị ga-ahụ ihe niile metụtara ide mmiri nke ahụ na-emetụta mmadụ niile na obodo ukwu oge ụfọdụ. Oge awa ikpeazụ n'ihe banyere ọdachi nke ụdị a n'ụwa niile. Data, mmebi na ndị na-efu na-eme ka ị mata ihe niile na-emetụta ọ bụla akọwapụtara ọ bụla.
Idei mmiri na Germany
por Portillo nke German eme Ọnwa 3 .
Idei mmiri na Germany erikpu akụkọ niile taa. Ma ọ bụghị maka obere ihe ...
Gịnị bụ idei mmiri?
por Monica sanchez eme 4 afọ .
Mmiri ozuzo, n'ọtụtụ akụkụ ụwa, na-anabata nnọọ, ma mgbe mmiri dara n'ike dị ukwuu ma ọ bụ n'oge ...
Idei mmiri ga-etinye nde mmadụ n'ihe ize ndụ n'ime afọ 25
Idei mmiri bu ihe gbasara ihu igwe nke anyi gha eji mara. Dabere na ọmụmụ e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Science ...
Anyị anụla banyere tsunamis ọtụtụ oge. Ndị a bụ ebili mmiri mmiri na-ebute site na usoro nke nnukwu ebili mmiri na-abịa site ...
Oké ifufe ahụ na-ahapụ ọtụtụ mbibi na ọnwụ abụọ na Murcia na Alicante
por Portillo nke German eme 5 afọ .
Mmiri mmiri ozuzo na ifufe na-emetụta mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ dum nke Iberian Peninsula na Balearic Islands ...
FOTO NA Vidio: Oké mmiri ozuzo na-akpata ọdachi na Spain
por Monica sanchez eme 5 afọ .
Nyaahụ bụ ụbọchị anyị na-agaghị echefu echefu. Mmiri ozuzo karịrị 120l / m2 ahapụla ọtụtụ n'okporo ámá n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ ...
Andalusia emetụtala idei mmiri dị egwu n'ihi oke mmiri ozuzo dị ogologo na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ ya mere…
N'iburu amụma gbasara ihu igwe emere na ụbọchị ndị a, mpaghara ndị Spain dị iri na otu ka ndị ike ...
Gịnị bụ ide mmiri
por Monica sanchez eme 7 afọ .
O nwere ike ịbụ na ị gara ebe mmiri juru. Ebe m bi na November 2013 anyi nwere ...